Ngathi - Xuzhou Kanfur Electronic Technology Co., Ltd.
Isibane se-UV esibulala iintsholongwane
Ulwazi malunga nenkampani Xuzhou Kanfur Technology Technology Co., Ltd., izabelo zokutshintshana Xuzhou Kanfur Electronic Technology Co., Ltd.
Yasekwa ngo-Matshi 2012, i-Xuzhou Kanfur Electronic Technology Co., Ltd.yishishini le-hi-tech langoku elidibanisa i-R & D, uyilo, i-Innovation, imveliso kunye nentengiso, ebekwe e-China Mining University Science Park eXuzhou. Ekuqaleni kokusekwa kwenkampani, izixhobo zonyango, ukubuyisela kwimeko yesiqhelo kunye neemveliso zempilo njengezona zinto ziphambili kwinkampani.
Okwangoku, inkampani ineqela le-R & D eliqeqeshekileyo nelizinzileyo, NGOKUZIMELELA R & D itekhnoloji eyintloko kunye nemveliso ephambili kunye nobuchwephesha bokuqhubekeka, kwaye iqela le-R & D linamandla amatsha kunye nophando lwenzululwazi, zonke iimveliso esizithengisayo zizimele iphuhliswe liqela lethu le-R & D kwaye inamalungelo apheleleyo okuzimela epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.
Inkampani ayiphumelelanga kuphela kwimbeko "yamashishini amancinci naphakathi kwezobuchwephesha", kodwa ikwadlulisa "isiQinisekiso seNkqubo yoLawulo lwePropati yeNgqondo", iimveliso zenkampani nazo zigqithile kwisatifikethi se-European Union CE, isatifikethi seCCC, isiqinisekiso se-ISET. Okwangoku, inkampani ineendidi ezininzi zeentlobo ezingaphezu kwe-20 zeemveliso ezivenkileni, ezinesibulala-magciwane kunye nomsebenzi wokubulala iintsholongwane kwiimveliso eziphambili sisibane sokubulala iintsholongwane, izixhobo zokuchongwa kwendalo esingqongileyo sinesixhobo sokufumanisa i-formaldehyde, umphuhlisi we-intravenous, igumbi lokulawula i-sauna. Inkampani ixhomekeke kwi-R & D yayo, kwimveliso nakwezinye izibonelelo zeshishini, kwiYurophu, eMntla Melika, kuMazantsi eAsia nakwezinye iimarike ukubonelela ngeemveliso, iphumelele ukuthembela kwabasebenzisi.
Inkampani yethu ikwanakho novavanyo olunobungqongqo lomgangatho wemveliso, ukubek 'esweni kunye nezixhobo zovavanyo kunye nenkqubo yovavanyo engqongqo sisiqinisekiso semveliso yenkampani. Iimveliso zenkampani zixhomekeke kumgangatho obalaseleyo, isabelo sentengiso siyaqhubeka ukwanda, kwaye ukuthengisa kuyaqhubeka nokukhula. Inkampani ivelise ishishini lezobuchwepheshe elinempawu ezahlukileyo zale mihla. Inkampani yethu ihlala ibambelela kwifilosofi yophuhliso lweshishini lwe "teknoloji kuqala, umgangatho wokuqala", ngokusebenzayo nangokufanelekileyo isebenzisa izixhobo zolawulo lwangoku, kwaye izinikele ekubeni ngumgangatho ophambili kushishino lwasekhaya. Ixesha elide, inkampani ibizibophezele ekuvuseleleni malunga neemfuno zabathengi, isebenzisana namaqabane avulekileyo, izinikele ekunikezeleni izisombululo zenkqubo, iimveliso kunye neenkonzo, kwaye isenza konke okusemandleni ukudala elona xabiso libalaseleyo kubathengi. Ngeli xesha lobugcisa obutsha obugcwele amathuba, imiceli mngeni kunye nokhuphiswano, ukukhula kwenkampani kuya kuphuculwa. Siza kuqhubeka nokuphucula inkqubo yolawulo, sonyuse ukwaziswa kwabasebenzi bezenzululwazi nobuchwepheshe, uphando kunye nophuhliso lweemveliso ezintsha kunye nophuhliso lweemarike, ukubonelela ngenkxaso eyomeleleyo kuphuhliso oluzinzileyo nolukhawulezayo lwenkampani. Inkampani iya kujolisa kwintengiso, ikhuthaze ukuphuculwa kwenkampani ngobuchwepheshe, kwaye izame ukwenza ukuba inkampani ikwazi ukwenza igalelo eliphezulu kwizixhobo zonyango, kwimo yesiqhelo nakwiimarike zezempilo.
Ngeteknoloji yemveliso entle kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo. Kwichip nganye, ibhodi yesekethe okanye inxenye, intuthuzelo inokulawula ngokupheleleyo yonke inkqubo ukusuka kwindawo yokugcina ukuze kuqinisekiswe umgangatho ozinzileyo wemveliso. Ngaphaya koko, uphicotho olusemgangathweni ngaphambi kokushiya umzi-mveliso sesona siqinisekiso sikumgangatho ophezulu.
Umgangatho wokuqala, ingqibelelo kuqala
Igumbi 102, Quanshan Mining Science Park, Xuzhou isixeko, Jiangsu kwiphondo, China 221000